IOM iyo Wasaarada Caafimaadka Puntland oo Xarigjaray Xarun Caafimaad Garowe+Sawiro – SBC
IOM iyo Wasaarada Caafimaadka Puntland oo Xarigjaray Xarun Caafimaad Garowe+Sawiro
Posted by Webmaster on May 8, 2013 Comments
Maanta, Wasaaradda Caafimaadka ee Puntland iyo Haya’dda IOM ayaa waxay si wada jir ah xarigga uga jareen xarun caafimaad oo daryeel caafimaad siin doonta toban kun (10,000) oo barakacayaal ah iyo bulshadda ay ku dhex nool yihiin ee ku dhaqan Caasimada Garowe ee Puntland, Somaliya.
Xaruntani waxay bixin doontaa adeegyada muhimka ee barnaamijka daryeelka caafimaadka asaasiga ah, gaar ahaan siinta baaritaano joogta ah iyo dawooyin lacag la’aan ah. Waxa kaloo xaruntan laga heli karaa; barnaamijka talaalka caruurta, daryeelidda Hooyadda, quudinta iyo xakamaynta cuduradda faafa iyo horumarinta baraarujinta caafimaadka ee barakacayaasha ku dhaqan degaanka Jowle iyo degaanada kale ee barakacayaasha oo ay taageerto Dawladda hoose ee Garoowe iyo wasaaradda arimaha Gudaha.
Todobadii sano ee u dambaysay waxaa aad u kordhay baaxadda dadka k unool Magaaladda Garoowe taas oo ay sababtay barakacayaal tiro badan oo ka soo cararay amni darada ka jirta Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya kuwaasoo raadinaya gar gargaarka bani’aadminimo ee loo fidinayo dadka ay abaaruhu haleeleen sanadkii 2011. U cudurada laga hor tegi karo ee faafa ee barakacayaashani ayaa aad u kordhey maadaama ay jirtey baahi caafimaad iyo adeegga fayo dhawrka iyo nadaafadda oo meesha ka maqnaa. Hay’adda IOM waxay ujeedadeedu tahay inay kordhiso una fududayso dadyawga tabaalaysan in ay helaan adeegga assaasiga ah ee caafimaadka.
“Fursadda ay barakacayaasha ku dhaqan gudaha iyo agagaarka ku dhaqan Garowe ay u leeyihiin inay helaan adeegga caafimaadka asaasiga aad bay u yarayd xiliyadii lasoo dhaafey, waxayna ku qaadan jirtay inay masaafo dheer u socdaan si ay u helaan adeeg caafimaad. Marka laga reebo furitaanka xaruntani, waxay hay’adda IOM sidoo kale tababar u qabatey shaqaalaha iyo adeeg bixiyayaasha ka shaqeyn doona xaruntani. In kastoo ay IOM wax badan bulshadu u qabatey hadana waxaa jirta baahi wayn oo dhanka gargaarka bani’aadminimada ah” Sidaa waxaa yiri Dr C/rasaaq Xersi Xasan oo ah Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland.
Ku dhowaad saddex sano, Hay’adda IOM waxay wada shaqeyn dhow kala lahayd Wacyigelinta iyo hoos udhigista takooridda la xiriirta HIV/AIDS Koomishanka AIDS ee Puntland (PAC) iyo Wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale IOM barnaamijkeeda ka hortagga tacadiga dumarku wuxuu siiyay barakacayaasha ku dhaqan Puntland 600 oo laambadood oo ku shaqaynaya ilayska qorraxda si loo yareeyo tacadiga ka dhanka ah dumarka oo ay barakacayaashu la kulmaan wakhtiyada habeenkii.